Ma qiyaasi kartaa Jony Ive oo ah agaasimaha guud ee Ferrari? Waxaa jira warar xan ah oo sheegaya. | Waxaan ka socdaa mac
Kuweena jecel Apple, maahan kaliya Mac, ma illoobi karo Sir Jony Ive. Kii masuulka ka ahaa tiro fiican oo aaladaha Apple ah iyo qaabaynta tiro wanaagsan oo Apple Stores ah ama Apple Park. Maaddaama uu yahay Ku-Xigeenka Sare ee Apple ee Naqshadeynta tan iyo 2015, Ive wuxuu sumcad weyn ku sameeyay shirkadda, laakiin waddadiisu waxay ka soo bilaabatay waqti hore. Ma jiro qof wali yimid ka dib markii uu ku beddelay ruuxiisa shirkadda. Taasi waa sababta warar xan ah ayaa isaga dhigaya inuu noqdo agaasimaha guud ee soo socda ee Ferrari.
Louis Camilleri, agaasimihii guud ee Ferrari, ayaa si lama filaan ah isku casilay waxaana liiska musharixiinta badalkiisa xusaya Jony Ive, iyo kuwa kale. Maestri sidoo kale waa la xusay Wuxuu la joogay Apple sidii CFO ilaa 2014. Weli wuxuu la socdaa shirkadda maanta, laakiin Jony Ive wuxuu bilaabay hal-abuurkiisa gaarka ah 2019 aasaasida shirkad naqshad u gaar ah, LoveFrom.
Weli wax jawaab ah kamasoo bixin labadan musharax ee ku saabsan in warka si dhab ah loo qaato ama ay tahay uun xanta ay ku bilaabeen baraha internetka iyo inay qaab u socoto. Si kastaba ha noqotee, waxay ku noqon doontaa waxoogaa la yaab leh shirkad muhiim u ah Ferrari inay doorato mid ka mid ah labadan jilaa. In kabadan waxkasta sababtoo ah khibrada yar ee ay labaduba ku leeyihiin qaybta gawaarida. Kama hadlayno inaan noqonno naqshadeeyaha guud, haddii kale eMaamulaha guud wuxuu qaadanayaa awood, raaxo iyo sumcad.
Waa inaan sugnaa dhacdooyinka oo aan eegno haddii kutiri-kuteenku uu sii kordhayo miisaankiisa ama haddii liddi ku ah Ive iyo Ustaad waxay raaci doonaan wadadii maareeyaha guud ee Vodafone oo waxay dhahaan kuwani waa sheegasho aan sal iyo raad lahayn. Way fiicnaan laheyd in la arko waxa Jony Ive awood u leeyahay. isagoo ah maamule Ferrari markuu arkay wixii uu ka qabtay Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Ma qiyaasi kartaa Jony Ive oo ah agaasimaha guud ee Ferrari? Waxaa jira warar xan ah oo sheegaya.
Madaxweynaha Qualcomm wuxuu amaaney processor-ka Apple ee M1